Global Voices teny Malagasy » Syria: Nanangana Ny Klioban’ny Mpamaky Boky Ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2017 3:32 GMT 1	 · Mpanoratra Razan Ghazzawi Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
Sokajy: Syria, Fiteny, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihina fa tamin'ny 12 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sambany no manolotra ny hetsika mamelombelona teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Siriana ny vondrona bilaogera Siriana dia ny fananganana vondrona mpamaky boky antserasera izany. Misafidy ny boky izay vakiany ireo mpandray anjara ary mamoaka ny heviny ao amin'ny bilaoginy manokana folo andro aty aoriana. Manana ny tranokalany ho azy manokana ny klioban'ny mpamaky boky , bilaogy iray izay ahafahanao mihaona amin'ireo mpanorina (tsanganana ankavanana) izy io. Efa namoaka lahatsoratra fohy momba ireo boky novakiana na mbola hovakiana ny bilaogy hatramin'izao. Le parfum nosoratan'i Patrick Süskind  no boky voalohany nosafidian'ny mpanorina ny klioba. Ireto ny fanehoan-kevitra nataon'ireo bilaogera Siriana roa tamin'ireo dimy izay nandray anjara:
Maneho fangoraham-po ho an'i Sahona, ilay maherifo, i Farah  ary mihevitra izy fa nasiaka taminy i Patrick Suskind, mpanoratra:
Mamerina ny fatin'ireo [zazavavy novonoiny] i Sahona rehefa tsaroany ny fofony. Fantany fa tsy sarobidy amin'ny olona ny zavatra nalainy avy amin'ilay vatana, ny fofony. Ny vatan'ilay zazavavy, ny hatsarany, ny fisiany no mahavariana azy ireo, fa tsy ny fofony. Tsy nieritreritra mihitsy izy fa ratsy ny zavatra nataony . Naka izay nilainy izy, ary navelany ho azy ireo izay nilainy, ny vatany. “
Nilaza i Fattousha  fa tsy manana fofona ny mpilalao fototra ary mangalatra izany avy amin'ireo hafa izy mba ho fantatra sy hajaina. Hoy i Fatousha naneho hevitra momba izany:
Tena mampatahotra ve ny maha antsika antsika ? Ary tokony handainga ve isika mba ho eken'ny fiarahamonina? “
Ilay tantara AL ORJUHAH, avy amin'ilay mpanoratra tantara an-tsehatra sady poety Syriana, Muhammad AL Maghout no boky vaovao vakiana amin'ity herinandro ity . Iray amin'ireo mpanoratra tantara an-tsehatra malaza indrindra ao Syria i Al Maghout ary nanampy betsaka tamin'ny famolavolana ny fomba fisainana Syriana tany am-piandohan'ny taompolo 1980 ny sasany tamin'ireo tantarany.
Farany, namoaka ny antsipiriany momba ireo fanehoan-kevitra samihafa i Alloush  , mpikambana ao amin'ny tetikasa Global Voices amin'ny teny Arabo. Nilaza izy fa avy amin'ny Global Voices ilay hevitra ary azo ampiasaina ihany koa ao amin'ny fanangonam-baovao amin'ny bilaogy Syriana vaovao ALMUDAWEN .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/19/110543/
 bilaogy : http://arabicbooksclub.wordpress.com/
 Le parfum : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Parfum
 Patrick Süskind: http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_S%C3%BCskind
 Fattousha : http://fatoshaa.wordpress.com/2008/11/07/61/
 Muhammad AL Maghout : http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammed_Almagut
 mpikambana : https://ar.globalvoicesonline.org/translators/